Dugsiga Dhexe - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
U diyaargarowga ardayda mustaqbalka
Dugsiga dhexe, ardaydu waxay kusii wadaan socdaalkooda waxbarasho waxayna xoojiyaan xirfadaha akhriska, qoraalka, xisaabta, sayniska, cilmiga bulshada iyo farshaxanka.
U guurista dugsiga dhexe waxay noqon kartaa dhacdo weyn oo nolosha qofka dhalinyarada ah. Abuuritaanka jawi waxbarasho oo aamin ah kuna habboon ardayda oo dhan ayaa ah mudnaanta. Meelkasta oo qof kastaa iska leeyahay (WEB) waa barnaamij kala guur ah oo ardayda ku soo dhaweynaya dugsiga dhexe iyada oo ujeedadu tahay in ardayda cusub laga dhigo kuwo raaxo leh inta lagu gudajiro sanadka ugu horeeya ee khibradooda dugsiga dhexe.
Qoysaska waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay sahamiyaan oo wax badan ka bartaan afarta dugsi dhexe ee ku yaal Robbinsdale Area Schools.
Habeennada Macluumaadka iyo Diiwaangelinta Dugsiga Dhexe
Qoysaska ardayda leh ee galaya dugsiga dhexe sanadka soo socda waxaa lagu casuumay inay kaqeyb galaan munaasabadahayaga casriga ah. Qoysaska iyo ardayda waxay la kulmi karaan maamulka iskuulka iyo macalimiinta, waxay wax ka baran karaan shanta qaybood ee aasaasiga ah iyo sida loo diiwaangaliyo.
Xidhiidhyada ku biirista ayaa la dhajin doonaa ka hor dhacdooyinka.
Janaayo 12, 2021
Wax badan ka baro diiwaangelinta bit.ly/PMS
Waxbadan ka baro halkan
Xiriirinta dhacdada (Google Buuxiyo)
Janaayo 14, 2021
Iskuxirka dhacdada (Zoom)
Febraayo 4, 2021
Qoysaska ardayda leh ee galaya fasalada 5-8 sanad dugsiyeedka soo socda waxaa lagu casuumay inay ka soo qeyb galaan!
Xiriirinta dhacdada (Google)
FAIR School Crystal - waa iskuul farshaxan farshaxan farshaxan oo u adeega ardayda dhigata fasalada 5-8aad
FAIR School Crystal waxay bixisaa jawi yar oo waxbarashada dugsiga dhexe ah, dhisme u gaar ah, farshaxanka diirada saara iyo guryo heer fasal ah oo ardaydu ku barwaaqoobi karaan. FAIR (Farshaxanka Farshaxanka Farshaxanka ah) Dugsiga Crystal waa iskuul magnet farshaxan oo u adeega ardayda dhigata fasalada 5-8 (FAIR Pilgrim Lane wuxuu u adeegaa ardayda fasalada K-4). Sida iskuulka bakhtiyaa-nasiibka dadweynaha, qoysaska ku nool gudaha iyo dibedda degmada 281 ayaa codsan kara inay ku soo biiraan barnaamijkeenna.
Dugsiga FAIR waa natiijada fikirka waxbarasho ee mala awaalka ah, qorshaynta manhajka curinta iyo hal-abuurnimada. Xarunteena, oo ku taal xaafadda woqooyi galbeed ee Crystal, waa iskuul qaran ahaan ay aqoonsan yihiin Waaxda Waxbarashada Mareykanka iyo Xarunta Farshaxanka ee Kennedy.
Ku soo dhowow Dugsiga Dhexe ee Plymouth. Waxaan nahay bulsho waxbarta oo heegan u ah ilaalinta jawi waxbarasho caafimaad qaba oo ardayda oo dhan lagu taageerayo inay la kulmaan yoolalka tacliimeed ee adag.
Koorsooyinka asaasiga ah waxaa ka mid ah xisaabta (oo loo qoondeeyay joomatari ahaan heerka u diyaargarowga), sayniska, cilmiga bulshada, Ingiriiska, akhriska, Isbaanishka iyo Faransiiska. Taageero ayaa loo heli karaa ardayda u baahan caawimaad yar oo dheeri ah.
Koorsooyinka Allied Arts waxaa ka mid ah farshaxanka muuqaalka; Xafiiska Microsoft; sayniska qoyska iyo macaamiisha; waxbarashada tikniyoolajiyadda, oo ay ku jiraan Gate-way to Technology (GTT) manhajka heerka dhexe ee Mashruuca Hoggaaminta Barnaamijka injineernimada; waxbarashada caafimaadka; KA QAADO; waxbarashada jimicsiga jirka; kooxda, ama kooxda hoolka (ama hoolka waxbarashada haddii ardaygu aanu ku jirin muusikada).
AVID (Advancement Via Individual Determination) waa xulasho u diyaarsanaanta kuliyada oo loogu talagalay in lagu caawiyo ardayda aqoonta leh - gaar ahaan kuwa noqon doona kuwa ugu horeeya qoyskooda ee dhigta kuleejka - u diyaar garowga iyo ku guuleysiga kuleejka, iyada oo la dardar galinayo barashada ardayda iyadoo la adeegsanayo habab ku saleysan cilmi baaris tilmaamaha iyo dhiirigelinta guusha.
Hadafka Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale (RMS) waa inuu bixiyo jawi aamin ah, wanaagsan oo daryeel leh kaas oo ka caawiya dhammaan ardayda inay horumariyaan iyagoo mabda 'leh, kuwa cimrigooda dheer wax barta iyo mufakiriin muhiim ah.
RMS waxay ardayda ku diyaarisaa fursado waxbarasho oo badan. Barnaamijka Sannadlaha Dhexe ee Baccalaureate (IBMYP) wuxuu ardayda siiyaa saldhig ballaaran oo aqoon ah, aragti caalami ah iyo nidaam sare oo xirfadaha fikirka muhiimka ah. Waa iskuul dhammaan ardayda ku jirta fasallada 6-8, oo leh qayb maamuus u leh ardayda danaynaysa.
RMS waxay ardayda ugu diyaarisaa bulsho caalami ah iyada oo loo marayo barnaamijka Advancement Via Individual Determination (AVID). AVID waa xulasho diyaar u ah kulleejada oo loogu talagalay inay ka caawiso ardayda aqoonta leh - gaar ahaan kuwa noqon doona kuwa ugu horreeya qoyskooda ee dhigta kuleejka - u diyaar garowga iyo ku guuleysiga kulliyadda. AVID waxay dardar gelisaa barashada ardayda iyadoo la adeegsanayo habab ku saleysan cilmi baaris loogu talagalay waxbarid iyo dhiirigelin lagu guuleysto.
Jawiga is aaminaad iyo ixtiraam leh, Dugsiga Dhexe ee Sandburg wuxuu iskaashi la yeelan doonaa waalidiinta iyo bulshada, wuxuu awood u siinayaa dhammaan carruurta inay bartaan oo ay noqdaan muwaaddiniin daneeya wax soo saar leh oo adduunka isbeddelaya.
Dugsiga Dhexe ee Sandburg wuxuu ardayda u diyaariyaa bulsho caalami ah iyada oo loo marayo barnaamijka Advancement Via Individual Determination (AVID). AVID waa xulasho diyaar u ah kulleejada oo loogu talagalay inay ka caawiso ardayda aqoonta leh - gaar ahaan kuwa noqon doona kuwa ugu horreeya qoyskooda ee tagaya kuleejka - u diyaar garowga iyo ku guuleysiga kulliyadda. AVID waxay dardar gelisaa barashada ardayda iyadoo la adeegsanayo habab ku saleysan cilmi baaris loogu talagalay waxbarid iyo dhiirigelin si loogu guuleysto.
S: Ma inaan ardaygayga ka diiwaangeliyaa dugsiga dhexe?
Haddii ardaygaagu hadda ka diiwaangashan yahay Dugsiyada Aagga Robbinsdale, waxaa si otomaatig ah looga diiwaangelin doonaa dugsiga xaafaddooda iyadoo lagu saleynayo cinwaanka. Hubi si aad u aragto waxa uu yahay iskuulka xaafadaada adoo adeegsanaya aaladda School Finder ee kore. Haddii aad doorbideyso inaad ardaygaaga u dirto dugsi kale, waxaad u baahan doontaa inaad dhammaystirto oo aad codsato beddelaad degmada ah (riix badhanka Macluumaadka Diiwaangelinta ee kore).
S: Ardaygaygu wuxuu dhigtaa RSI, laakiin kuma noolaanno aagga ka-qaybgalka Dugsiga Dhexe ee Plymouth. Maxaan sameynaa
Dhammaan ardayda RSI waxay si otomaatig ah uga diiwaangashan yihiin Dugsiga Dhexe ee Plymouth. Ardayda ku dhexjirta gudaha degmada (taas oo ah, ardayda ku nool xadka degmada) waxay helayaan gaadiidka baska dugsiga ee Dugsiga Dhexe ee Plymouth.
S: Waxaan xiiseyneynaa inaan xaadirno FAIR School Crystal. Maxaan sameynaa
Haddii ardaygaagu uusan hadda xaadirin LAYNKA Xujaajta ee 'FAIR School', waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso oo aad codsato beddelaad degmada ah. Gaadiidka baska dugsiga waxaa la siiyaa dhammaan qoysaska ku nool degmada.
S: Waxaan u furannahay isqorista Dugsiyada Robbinsdale Area. Halkee baynu u aadi doonaa dugsiga dhexe?
Ardayda aan daganeyn ee furo isdiiwaangalinta waxay raaci doonaan nidaamka quudin ee iskuulka hada jira. Haddii aad rabto in ardaygaagu dhigto dugsi dhexe oo ka duwan, waxaad u baahan doontaa inaad dhammaystirto dalab loogu beddelayo degmo. Qoysaska hadda ka diiwaangashan furan uma baahna inay dib u codsadaan.
S: Ma u baahanahay inaan dalbado beddelka degmada ee dugsiga dhexe haddii aan hore u codsaday oo la ii oggolaaday beddelka dugsiga hoose?
Haa. Marka laga reebo RSI ama FAIR Dugsiga Xajka, ardayda waxaa si otomaatig ah looga diiwaan gelin doonaa dugsiga dhexe ee xaafadooda. Haddii ardaygaaga horay loogu oggolaaday beddelka dugsiga hoose, waa inaad dib u codsataa beddelka dugsiga dhexe haddii aad jeclaan lahayd inuu ardaygaagu dhigto dugsi aan ahayn dugsiga dhexe ee xaafaddooda ah.
Macluumaad dheeri ah ayaa sidoo kale la wadaagi doonaa inta lagu jiro Macluumaadka Dugsiyada Dhexe iyo Habeennada Diiwaangelinta. Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah, fadlan la xiriir Xarunteena Diiwaangelinta lambarkan 763-504-8080.